‘हाकिम साप हाम्रो पनि गुनासो सुनिदिनूस्’ - Ratopati
विकास सबैलाई चाहिन्छ । नेता, पत्रकार, कर्मचारी, शासक, प्रशासक, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, संघ–संस्था जो भए पनि समाजमा बस्छौँ । आफ्नो घर, टोल, छिमेक र समाजमा हुने हरेक विकास निर्माणका कार्यसँग हाम्रो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार रहेकै हुन्छ । यसै सन्दर्भमा आफ्नै गाउँ र टोलबारे केही भन्न जमर्को गरेको छु । यसमा मेरो निजी स्वार्थ भए वा नभए पनि यसबाट समाजले केही पाउन सक्छ वा सक्दैन भन्ने तपाईंहरु आफैँ निर्धारण गर्नुहोला ।
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वर नगरपालिका–५ खाद्य संस्थानदेखि पासमानटोल हुँदै मालपोत जाने बाटोमा बायाँपट्टि करिब ६ फिटको साँघुरो गल्ली छ । सोही गल्लीभित्रको एउटा घर मेरो पनि हो । पेसाले पत्रकार हँु तर दुर्भाग्य आफ्नो घर पुग्ने गल्ली किन ६ फिटमात्र छ भन्नेबारे आजसम्म मिडियाको माध्यमबाट आवाज उठाउन सकेको छैन । आफ्नो पत्रकारिता जीवनमा समाज विकास र समाजका विकृतिबारे अनेकौँ समाचार लेखेकै छु तर आफैँ साँघुरो गल्लीमा बस्नुको पीडा लेख्न सकेको थिइनँ । सायद त्यही भएर होला पनि अचेल पत्रकारमाथि धेरैको विश्वास गुम्न थालेको छ । आफ्नै हक र अधिकारे संरक्षण गर्न नसक्ने पत्रकारले के समाजको विकासका लागि आवाज उठाउन सक्छ भन्ने पनि प्रशस्तै छन् । सम्भवतः उनीहरु आफ्नो ठाउँमा सही पनि छन् ।
हालै संसदीय कोषबाट क्षेत्र नं. ३ का सभासद् राम दयाल मण्डलले क्षेत्र नं. ३ का विभिन्न गाउँ र टोलमा पानीेको धारा पुर्याका छन् । सौभाग्यले धारा मेरो घरमा समेत जडान भयो । मेरो घरको सामुन्नेसम्म त नाला आएकाले फोहोर पानी निकाल्ने समस्या रहेन तर सोही ठाउँमा अन्यको घरसम्म नाला नभएको, साबिकमा पिसिसी सडक बनाउने बेला सडक फराकिलो गरी नालासहितको पिसिसी सडक निर्माण नगरेको नगरपालिकाकै कारण केहीको निजि स्वार्थ पूरा भई समाजका अन्यलाई अझै सास्ती भोग्नुपरेको स्थिति छ । यता, हाम्रो सभासद्ले धारा लगाउन भ्याए पनि धारा लगाउन खनिएको सडक पुनः मर्मत गर्ने, सो धारा प्रयोगपछि निस्कने फोहोर पानीका निकासका लागि समेत व्यवस्था गर्न नसक्दा मेरो घरदेखि ब्रह्मस्थान जाने बाटोमा सडकमै फोहोर पानी बग्ने गरेको छ । साथै अरुको निजी जग्गामा फोहोर पानी पस्नुका साथै सडकमै जमेको फोहोर पानीले लामखुट्टेलाई आफ्नो परिवार हुर्काउन र रोग फैलाउन सजिलो भएको छ ।
अहिले साँघुरो गल्ली र सडकमा जमेको फोहोर पानीकै कारण पैदल, साइकल र मोटरसाइकल सवार सयौँपटक दुर्घटनाबाट बालबाल बच्ने गरेका छन् । भनिन्छ– दुर्घटनाका लागि एकपटकको खराब भाग्य नै काफी छ । साबिकका नालाको कुरा गर्नुपर्दा नाला सफा हुन सकेका छैनन् । जताततै नाला जाम भई फोहोर पानी सडकमै जम्ने गरेको छ । घरबाट निस्कने फोहोर उठाउन कहिले महिना त कहिले दुई महिनामा नगरपालिकाको ट्याक्टर आउँछ । सोबापत समेत चियाका लागि केही दिनुस् भनी पैसा उठाउँछन् ।
नगरपालिकाले नगरेको होइन, प्रत्येक वडामा टोल सुधार समिति बनाएकै छन् तर ती समितिमध्ये अधिकांश खाने र लुट्नेको मात्र भयो । यही गति हाम्रो वडाको समितिमा समेत देखियो । पैसा बचाएर आफ्नो भुँडी भर्न नै सडकछेउकै माटो खनी सडकमा हाले र ठूलै खाल्डो बनाए ।
अर्थात् समाजमा विकास गर्न बनाएको समितिले विनाश गर्यो । त्यही खाल्डोमा परेर कुनै दिन ठूलै दुर्घटना नहोला भन्न सकिन्न । अर्को कुरा नगरपालिकाले बनाएको टोल सुधार समितिमा त्यो समितिको काम, कर्तव्यबारे उनीहरुलाई जानकारी नगराएर हो कि सबै काम कर्तव्य थाहा हुँदाहुँदै पैसा खान पाइने काम मात्र गर्ने सोच राख्ने समितिले न त टोलभित्रका फोहोर देख्न सकेका छन् न त जाम परेको नाला नै । साथै अतिक्रमित सडक पनि उनीहरुको आँखामा सम्भवतः नपरेको अवस्था छ । नगर प्रमुखसँग म वडा नं. ५ को स्थानीयको सानो आग्रह हालै टोल सुधार समितिले बनाएको सडक श्रमदानविना नै पास गरी उनीहरुको पैसा निकासा गर्नुभयो । सुनियो– नगरपालिकाकै केही कर्मचारीले केही प्रतिशत कमिसन पनि लिएको कुरासमेत सुनियो ।
यसलाई कुन रुपमा लिनुहुन्छ र प्रस्तुत गरिएका समस्या कसरी समाधान गर्नुहुन्छ जिम्मेवारी तपार्इंको पनि छ कि ? त्यस्तै तपार्इंले गराउनुभएको सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा विभिन्न वडाको बिजुली बत्ती दुरूस्त राख्न लाखौँ खर्च भएको जानकारी गराउनुभएको छ तर मेरो वडाका सडक अधिकांश अन्धकारमय नै छ । हाम्रै वडाका अधिकांश आमा, छोरी, बुहारी अझै शौचालय अभावमा सडकमै दिसा गर्न बाध्य छन् । पैसा भएर शौचालय नबनाई सडकमा जानेलाई लाज लाग्नुपर्ने हो तर नहुनेका लागि केही सार्वजनिक शौचालय बनाउन सकिन्छ भने त्यता तिर समेत तपाईको ध्यान जाओस भन्ने अपेक्षा समेत गरेका छौँ ।
अतिक्रमण गरी बनाएको घरले साँघुरो भएको बाटोले आगलागीको बेला न त वारूण यन्त्र टोलभित्र आउन सक्ने परिस्थिति छ न त बिरामी परेको बेला एम्बुलेन्सका लागि बाटो छ । हाम्रा आदरनीय नगरपालिकाका पुर्वहाकिम सापहरु र पुर्व तथा वर्तमान कर्मचारीको केही व्यक्तिहरुसँगको साँठगाँठ र लेनदेनको परिणाम आज हामी भोग्न बाध्य छौँ । हाकिम साप बिन्ती छ– अरु नर्कको जीवन जिउन हामीलाई विवश नपार्नूस् । सक्नुहुुन्छ भने मेरो वडालाई सुधारेर देखाउनुस्, नभए टोल सुधार समितिको नौटंकी बन्द गर्नुस् ।
समाजमा रहेका विकृति विसंगति, बाधा–अवरोध फुकाइ सुधारतर्फ अग्रसर गर्ने मुख्य जिम्मेवारी नगरपालिकाको रहेकाले समस्या समाधानका लागि नगरपालिकाका सबै दोषी कर्मचारी र प्रमुखलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीसमेत हाकिम सापकै काँधमा रहेकाले तपार्इंले तुरून्त कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हुनेछ भनी अपेक्षा लिएको छु ।
साथै अनधिकृत रुपमा बनाइएका घरको दस्तावेज चेक–जाँच गरी अतिक्रमित जग्गा फुकाउनुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरी समस्या समाधानतर्फ अगाडि बढनुस् । अव्यवस्थित नाला तुरून्त सरसफाइ गराई नालाको निकास व्यवस्था गर्नुस् । विभिन्न समयमा सडक बत्तीका लागि खर्च गरिएको रकम वास्तवमै सडकबत्तीमै खर्च भएको हो कि कसैको गोजीमा गएको हो, सोको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुस् । टोल सुधार समिति र तपाईंकै नगरपालिकाका कर्मचारीबीच भएको लेनदेनबारे समेत छानबिन गरी दोषी ठहरे कारबाही गरी समाज र नगरपालिकालाई स्वच्छ बनाउनुस् । अनि मात्र तपार्इंको कार्यकाल सफल भएको सिद्ध हुन्छ । अन्यथा सम्मान कार्यक्रममा गएर सम्मान ग्रहण गर्न बन्द गर्नुस् ।